Shintsha umbala wewashi lebha yemenyu nge-Pretty Clock | Ngivela kwa-mac
Shintsha umbala wewashi lemenyu nge-Pretty Clock
Uma kukhulunywa ngokwenza ikhophi yethu ye-MacOS ngokwezifiso, i-Apple ayihlali isinikeza izinketho eziningi zokushintsha imininingwane emincane kakhulu yekhophi lethu. Ukuze senze njalo, ezimweni eziningi, siyaphoqeleka ukuthi sisebenzise iMac App Store noma ngaphandle kwaso, kuya ngohlobo lwenguquko oyenzayo ohlelweni.
Lezi zinhlobo zamathuluzi azidingeki kakhulu, kepha kulokhu, abangaphezu koyedwa kini, njengoba kwenzekile kimi, bangasebenzisa uhlelo lokusebenza ku-Pretty Clock, uhlelo lokusebenza esingashintsha ngalo umbala wewashi le-Mac yethu. Ukusetshenziswa? Ngokushesha thola isikhathi lapho sibheka ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Lapho iboniswa ngomunye umbala, ukubona kwethu kuzobheka umbala okuwo, Zilahle zonke izinhlamvu eziboniswe kokumnyama okudala okusetshenziswa yi-macOS ngokwendabuko kubha yemenyu ephezulu. Uma sisebenzisa umbala ogqamayo, obomvu ngaphandle kokuqhubeka, ukuthola usuku nesikhathi shazi kuzoba umoya, ikakhulukazi uma usujwayele ukuholwa yilowo iMac ekhombisa lapho uphambi hhayi nge-Apple Watch noma i-iPhone.
Ngaphakathi kokukhethwa kukho kokumiswa okunikezwa uhlelo lokusebenza, sithola ukuthi kungenzeka ukusebenzisa ifomethi yamahora angama-24, kukhombisa isikhathi ngemizuzwana, kukhombisa usuku lwesonto, kukhombisa usuku lwenyanga bese sikufaka ekuqaleni kwe-Mac yethu. isikhathi sokwenza umbala ngokwezifiso lapho sifuna khona iwashi nesikhathi nosuku, I-Pretty Clock isinikeza imibala ephelele yemibala ukuze sisungule leyo esiyifunayo. Uma sifuna ukucacisa ngokwengeziwe, singasebenzisa i-eyedropper ukusetha umbala ofanayo okhonjiswa njengamanje kuhlelo lokusebenza esivule ngalo ngaleso sikhathi.
Iwashi elihle itholakalela ukulanda mahhala ngokusebenzisa isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Shintsha umbala wewashi lemenyu nge-Pretty Clock
I-Mapux Brand Stable engabizi ngokugcwele
I-Mail Pilot ilungiselela inguqulo 3 enezindaba ezibalulekile